ရာဖယ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဤဆောင်းပါးကို ရက်ဖီအယ်စန္တီ နှင့် ပေါင်းစပ်ရန် အကြံပြုထားပါသည်။ (ဆွေးနွေးရန်) ၂၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၈ ကတည်းက အဆိုပြုထားသည်။
ရာဖယ်ဟု ထင်မှတ်ရသည့် ပုံတူပန်းချီ
ရာဖယ်လို ဆန်ဇီယို ဒါ ရာဘီနို
(၁၄၈၁-ဖော်ပြချက် အမှား - နားမလည်သော ပုဒ်ဖြတ် စာလုံး "၃"။-၂၈)မတ် ၂၈၊ ၁၄၈၁ သို့မဟုတ် (၁၄၈၃-ဖော်ပြချက် အမှား - နားမလည်သော ပုဒ်ဖြတ် စာလုံး "၄"။-0၆)ဧပြီ ၆၊ ၁၄၈၃
ရာဘီနို, ရာဘီနို မြို့စားပိုင်နယ်
ဧပြီ ၆၊ ၁၅၂၀(၁၅၂၀-ဖော်ပြချက် အမှား - နားမလည်သော ပုဒ်ဖြတ် စာလုံး "၄"။-0၆) (အသက် ၃၇)
ရာဖယ်လို ဆန်ဇီယို ဒါ ရာဘီနို (အီတလီ: [raffaˈɛllo ˈsantsjo da urˈbiːno]; မတ်လ ၂၈ (သို့မဟုတ်) ဧပြီလ ၆၊ ၁၄၈၃ – ဧပြီ ၆၊ ၁၅၂၀)၊၊'ရာဖယ်'(/ˈræfeɪəl/, US: /ˈræfiəl, ˌrɑːfaɪˈɛl/), ဟုလည်း ​ခေါ်ကြသည့် ပုဂ္ဂိုလ်သည် ဉာဏ်သစ်အရေးတော်ပုံ ခေတ်တွင် ထင်ရှားကျော်ကြားသော အီတလီ လူမျိုး ပန်းချီဆရာ နှင့် ဗိသုကာပညာရှင် တစ်ဦး ဖြစ်သည်။
ရာဖယ်သည် အလွန်တရာ ဖန်တီးနိုင်စွမ်း ကောင်းသူဖြစ်သည်ကို သူ၏ အသက် ၃၇ နှစ်၌ ကွယ်လွန်ခဲ့သော်လည်း အလွန်တရာ ကြီးမားလှသည့် အလုပ်လုပ်ရာ နေရာကြီးကို ဦးစီးခြင်းဖြင့် ကွယ်လွန်သည့် အခါ များပြားလှသော လုပ်ငန်းများကို ချန်ထားခဲ့သည်များကို ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် သိရှိနိုင်သည်။ သူ၏ ဖန်တီးမှုများကို ယခုအခါ ဗာတီကန် နန်းတော် တွင် ရှိသော သူ၏ အကြီးမားဆုံး ဖန်တီးမှု ဖြစ်သည့် နံရံဆေးရေးပန်းချီ ဖြစ်သည့် ရာဖယ်ခန်း တွင် တွေ့နိုင်သည်။ သူ၏ အတောက်ပဆုံး အနုပညာသည် ဗာတီကန် စတန်ဇာ ဒယ်လာ ဆက္ကနာတူရာ တွင် ရှိသည့် အေသင်ကျောင်းတော် ပင်ဖြစ်သည်။ သူ၏ ရောမမှ အစောပိုင်းနှစ်များတွင် သူ၏ များပြားသော ဖန်တီးမှုတို့သည် သူ၏ ရေးဆွဲမှုများကို သူ၏ လုပ်ငန်းမှ သိသာလှသော အရည်အသွေး အားနည်းမှု တို့ဖြင့် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ သူသည် ရိုးမား၏ ပြင်ပဒေသတို့တွင် သူ၏ ပုံနှိပ်လုပ်ငန်း ဖြင့် လူသိများသော်လည်း သူ၏ ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတွင် အလွန်ပင် ဩဇာညောင်းခဲ့သည် ဟု ဆိုနိုင်သည်။
သူကွယ်လွန်ပြီးနောက် သူ၏ တည်ငြိမ်အေးချမ်း၍ သဟဇာတဖြစ်သော အရည်အသွေးများရှိသည့် လက်ရာတို့သည် အမြင့်ဆုံး စံ အဖြစ် တစ်ဖန် သတ်မှတ်ခံရသော အခါ သူ၏ ပြိုင်ဖက် ဟု ဆိုနိုင်သည့် မိုက်ကယ်အိန်ဂျလို ၏ ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုသည် ၁၈ ရာစု နှင့် ၁၉ ရာစု ထိတိုင်အောင် ပိုမို တိုးတက်လာခဲ့သည်။ သူ၏ သက်မွေးမှုကို ဂျော်ဂျီယို ဗာဆာရီ ၏ အဆိုအရ သုံးပိုင်းခွဲခြားနိုင်သည်။ အစောပိုင်း ယူအမ်ဘရီယာ မှ နှစ်များ ၊ ထို့နောက် ဖလောရင့် မှ အနုပညာ အစဉ်အလာတို့ကို ဆည်းပူးနေသည့် လေးနှစ်တာ (၁၅၀၄ - ၁၅၀၈) ကာလ ၊ ထို့နောက် သူ၏ ကသီတလင် နိုင်သော နောက်ဆုံး ကာလ (သို့မဟုတ်) အောင်မြင်သော ကာလ (ပုပ်ရဟန်းမင်း နှစ်ဦး နှင့် သူတို့နှင့်ပတ်သက်ရာ ပတ်သက်ကြောင်းများအတွက် ဆယ့်နှစ်နှစ်တာ အလုပ်လုပ်ပေးခဲ့ခြင်း တို့ဖြစ်သည်။ 
၂ အစောပိုင်းဘဝ နှင့် ဖန်တီးမှုများ
၃ ဖလောရင့်မှ လွှမ်းမိုးမှုများ
၄.၁ ဗာတီကန် "စတန်ဇီ"
ဂျီအိုဘန်နီ ဆန်တီ၊ရာဖယ် ၏ ဖခင်။ ကောင်းကင်တမန် နှစ်ပါးမှ ဖေးမထားသော ခရစ်တော်, c.1490
အစောပိုင်းဘဝ နှင့် ဖန်တီးမှုများ[ပြင်ဆင်ရန်]
ဂွီဒိုဘယ်လ်ဒို ဒါ မွန်တီဖယ်လ်ထရို, ရာဘီနို မြို့စား (၁၄၈၂-၁၅၀၈), c.1507.
The Mond Crucifixion, ၁၅၀၂ - ၁၅၀၃, ပယ်ရူဂီနို ၏လက်ရာ နှင့် ဆင်တူသည်။
The Coronation of the Virgin, ၁၅၀၂ -၁၅၀၃
The Wedding of the Virgin, ရာဖယ် ၏ ခေတ်အမီဆုံး လက်ရာတစ်ရပ်
Saint George and the Dragon၊ရာဘီနို ရုံးတော်အတွက် လက်ရာငယ် (29 x 21 cm)တစ်ခု
The Ansidei Madonna, c. 1505, ပယ်ရူဂီနို ၏ လက်ရာတို့မှ စတင်ခွဲထွက်လာသည်။
The Madonna of the Meadow, c. 1506, လီယိုနာဒို ၏ မြင့်မြတ်သော မိသားစု ၏ ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် ပိရမစ်ပုံစံ သဘောတရားကို သုံးထားခြင်း
Saint Catherine of Alexandria, 1507,လီယိုနာဒို ၏ လီဒါ မှ သရုပ်ပြပုံကို သံယောင်လိုက်ထားခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။
Deposition of Christ, 1507, ရိုးမား ဆာကိုဖာဂီ မှ ပန်းချီ
↑ Jones and Penny, p. 171. ဖော်ပြပါ ရာဖယ်၏ ပုံတူသည် "နှောင်းပိုင်းတွင် ဖန်တီးခဲ့သည် များတွင် ရာဖယ်နှင့်အတူဆုံး ပုံတူအဖြစ် အများသဘောတူညီသည့် ပုံတူ"ဟု ဗာဆာရီ ဖြစ်သည်။ ထိုပုံသည် အေသင်ကျောင်းတော် မှ ပုံဖြစ်သည်။
↑ မူကွဲများတွင် ရာဖယ်လို ဆန်တီ ၊ ရာဖယ်လို ဒါ ရာဘီနို (သို့မဟုတ်) ရာဖယ် ဆန်ဇီယို ဒါ ရာဘီနို ဟုလည်း ရှိသည်။ မိသားစုအမည် ဆန်ဇီယို သည် အီတလီ စကား ဆန်တီ ၏ လက်တင်မှုပြုခြင်း ဖြစ်သော ဆန်တီယပ် မှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ သူသည် စာရွက်စာတမ်းများတွင် လက်တင်ပုံစံ ရာဖယ် ရာဘီနပ် ဟု လက်မှတ်ရေးထိုးလေ့ရှိသည်။ Gould:207
↑ Jones and Penny, p. 1 နှင့် ၂၄၆။ သူသည် သူ၏ ၃၇ နှစ်မြောက် မွေးနေ့တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ အခြားသော မှတ်တမ်းများအရ သူသည် မွေးနေ့ နှင့် ကွယ်လွန်ခဲ့သော နေ့ရက်သည် မဟာသောကြာနေ့တွင် ဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းသည် အထက်ပါ အဖြစ်နှစ်ခုလုံး မဖြစ်နိုင်သည့်အလျောက် များစွာ ဆွေးနွေးခြင်းခံရသည်။
↑ Image။ szepmuveszeti.hu။ 2012-03-14 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရာဖယ်&oldid=704799" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၂:၀၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။